Automatic fehin'aina Loader Fibre Laser Sodina Cutting Machine
High fampisehoana Tube tamin'ny laser amin'ny fanapahana milina mandeha ho azy sy mampidina entana avy Loading. Manapaka manodidina, mahitsizoro,-joro sy ny fantsona mombamomba hanome fahafaham-po isan-karazany ny fantsona fanapahana zavatra ilaina.
Mandeha ho azy io tamin'ny laser manasa Tube milina fanapahana dia fitaovana amin'ny boky sy feno loader fefy mba hamokatra avo kalitao ao amin'ny faritra isan-karazany ny endriny sy ny habeny.
Tube Laser fanapahana Machine P2080
Indrindra ho an'ny tamin'ny laser manapaka ny fantsona vy manodidina, efamira, mahitsizoro, telozoro, boribory lavalava, andilany Tube sy ny hafa miendrika Tube sy mpitsoka sodina rehetra. Ny fantsona savaivony ivelany dia mety ho 20-200mm, 8m ny halavany.
1KW Fibre Laser Sodina Cutting Machine
Sodina tamin'ny laser fanapahana milina amin'ny 1KW tamin'ny laser fibre loharano. Maximum fanapahana hatevin'ny rindrina 12mm carbone vy, 6mm Stainless vy, 4mm alumin ...
2000W Fibre Laser manapaka Machine for Metal Sodina sy ny Tube
Metal sodina sy ny milina fanapahana tamin'ny laser Tube amin'ny 2000w tamin'ny laser fibre loharano. Maximum fanapahana hatevin'ny rindrina 15mm carbone vy, 10mm stainles ...